အအေးလှည့်ကွိုင် (CRC အပြည့်အဝ Hard / လျော့ပါးစေခြင်း) လက်ကားဈေး
အမျိုးအစားများ: အားလုံး, CRC အပြည့်အဝ အမှတ်အသားများ (Tags): အင်ဒိုနီးရှား, နီပေါ, ဖိလစ်ပိုင်
အအေးခံထားသောကွိုင်ကို slab ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် (အဓိကအားဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သတ္တုများပုံသွန်း billet), ကြိတ်ခွဲထားသောကြိတ်စက်နှင့်အပြီးသတ်ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အပူပေးသည်. နောက်ဆုံးကြိတ်စက်၏နောက်ဆုံးကြိတ်ခွဲစက်မှသံမဏိချောင်းကိုစုတ်တံဖြင့်စီးဆင်းသည်, နှင့် coiler အားဖြင့်သံမဏိကွိုင်သို့လှိမ့်သည်, နှင့်အအေးသံမဏိကွိုင်ရှင်းပြီဖြစ်ပါတယ်.
ထုတ်လုပ်မှု Lines အသေးစိတ်
မေး / BQB302
GB ကို / T912-1989
အထွေထွေဆောက်လုပ်ရေးအတွက်, တံတားများ, ships, vehicles, စသည်တို့.
Cold Rolled ကွိုင်
ASTM5140, ASTM4140, ASTM9260,65Mn,27SiMn,12ကွမ်းခြံကုန်း,42CrMo4, DIN1.7225,20MnB5
Cold rolled Coil ကိုအဓိကအားဖြင့်သုံးသည်: ရေနံဓာတုပစ္စည်း, မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်း, စိုက်ပျိုးရေးယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်း, သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း, သံမျှော်စင်လုပ်ငန်း, သံမဏိကိုယ်ထည်လုပ်ငန်း, ပါဝါပစ္စည်းကိရိယာများ, အလင်းဝင်ရိုးစွန်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆက်သွယ်ရေးမျှော်စင်, လိမ်သံမဏိပိုက်စက်မှုလုပ်ငန်း, သတ္တုပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အစက်မှုလုပ်ငန်း, ယာဉ်တန်ဆာပလာ , ဘီးထုတ်လုပ်မှု, ဖိအားရေယာဉ်များ, ဘွိုင်လာ, သံမဏိပုံစံ, ရိန်း, ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစက်ယန္တရား, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း, ကွန်တိန်နာ, Safe, ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ဂျုံမှုန့်, စပါးနှင့်ရေနံစက်ယန္တရား, အလေးချိန်ကိရိယာများ, မီးသတ်ကိရိယာများ, ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, သံမဏိကွက်စက်ရုံ, မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းဘရိတ် pads, သတ္တုတွင်းစက်ယန္တရား, အအေးလှိမ့်ချွတ်စက်များ, ပန်ကာပင်များ, shelves, စည်စက်မှုလုပ်ငန်း, အလင်းရောင်ကိရိယာများ, လယ်ယာနှင့်တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူရေးစက်ယန္တရား, ရိတ်သိမ်းသူများ, အအေး -formed သံမဏိ, installation ကုမ္ပဏီများ, စသည်တို့.
အထူ 0.12-3.0မီလီမီတာ(အများအားဖြင့် 0.3-0.8mm)
အကျယ် 900-1550မီလီမီတာ 700-1550မီလီမီတာ 900-1550မီလီမီတာ
ကွိုင်အလေးချိန် 3-15 MT
Jianglin သံမဏိကော်ပိုရေးရှင်းသည် 6S စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုတင်းကြပ်စွာကျင့်သုံးနေသည်. အတိတ်အတွက်5years, ကမ္ဘာ့သံမဏိဈေးကွက်သည်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေအောက်တွင်ရှိသည်, ငါတို့ရောက်နေပြီ 5%-9% ဝင်ငွေတိုးသည်.
GI အတွဲတစ်ခုစီအတွက်, PPGI, PPGL, အထူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးလိမ့်မည်, မျက်နှာပြင်, နှင့်အခြား parameters တွေကို, အရည်အသွေးအာမခံရန်သာ. အဲဒီအချိန်မှာ, ကွိုင်တိုင်းကိုခြေရာခံရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမိန့်ခြေရာခံစနစ်ရှိသည်. မည်သည့်အမှားမဆိုဖြစ်တတ်ပါတယ်, ငါတို့တာဝန်ယူလိမ့်မယ်.
Jianglin သည် LC အပါအ ၀ င်မည်သည့်လျော်ကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ , နိုင်ပွဲတစ်ပွဲအတွက်မျှော်လင့်ချက်သာဖြစ်သည်. အဲဒီအချိန်မှာ, ငါတို့လည်း Alibaba နဲ့ပူးပေါင်းတယ်. Alibaba လုံခြုံရေးအာမခံချက်အမိန့်ကိုကြိုဆိုပါသည်.
– Normally, MOQ forcoilis တစ်ကွိုင် 3-5 တန်ချိန်.
– Normally, ကျွန်ုပ်တို့၏တင်သောဆိပ်ကမ်းများမှာ Tianjin ဖြစ်သည်, နှင့်ရှန်ဒေါင်း. သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်ဆိပ်ကမ်းကိုမဆိုသတ်မှတ်နိုင်သည်.
– Yes, ကျွန်ုပ်တို့၏စတော့ရှယ်ယာအခြေအနေပေါ်မူတည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအခမဲ့နမူနာများပို့လိမ့်မည်. အမြန်ကြေးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကပေးဆောင်ရမည်.
GALVALUME သံမဏိကွိုင်(G550 AZ20-100) / အလွိုင်းသံမဏိကွိုင်
ပြုပြင်ထားသော GALVALUME သံမဏိကွိုင် (PPGL) Matte finish
ပိုက်အတွက်အလွိုင်းသံမဏိ GI ချွတ်ကွိုင်，ကွမ်းခြံကုန်း，နှင့်ငြမ်း）
hot-dipped galvanized သံမဏိ(GI ကွိုင်) လက်တင်အမေရိကစျေးကွက်တွင်